Madhaimani ekugaya edhaimani akagadzirwa nemoda-akagadzirwa nedhaimani hupfu, poly crystalline daimondi seyakanyanya, hwakasiyana hwesimbi hupfu seanosunga mumiririri, sintered pakakwirira tembiricha uye kumanikidza kuumba yakazara.
1.Kukuya kweasina-esimbi akaomarara uye akapwanya zvinhu zvakadai seterrazzo, machena, simende pakarongedzwa, kongiri, girenayiti yakaoma inodzivirira zvinhu. Inokodzera kukongiri flooring, kupfeka-nemishonga flooring. Kukuya kweterrazzo pasi, epoxy flooring, nezvimwewo Chigadzirwa chakapinza uye chakasimba uye chine akasiyana mashandisirwo.
2. Inoshanda kune akasiyana flooring michina.
1.Higher kuomarara uye zvimwe kusakara kuramba: sarudza yepamusoro dhayamondi, unopinza uye vanopfeka nemishonga, zvakawanda hwakadzama kugadzira pamusoro.
2.Safe uye yakavimbika Welding: iyo yekugaya block uye iyo substrate yakave yakasunganidzwa uye kugadzira kwenguva zhinji, iyo yakasimba uye yakavimbika uye isingazobviswa kubva kune substrate yekuvaka kwakachengeteka.
3.Fine hunhu, mukobvu nezvimedu, yakafara aricheke musoro, simbi kubheka pendi: nemasasa hunoshamisa, sandara pamusoro, wakanaka hunoshamisa, kumeso substrate, kumeso uye asiri kuzunungusa; kukwirira kwakasimba uye huwandu hwedhaimani, mamwe mamita ekukuya; yakafara uye mukobvu cutter musoro, hombe uye mukobvu masumbu, kuwanda hupenyu; kubheka pende tekinoroji, yepamusoro-magumo mhepo, yakatsetseka pamusoro, kwete nyore ngura.
PCD yedhaimani plug
* PCD yedhayamaki plug ino shandiswa pakukuya michina yekubvisa zvine hukasha zveglue, epoxy, machira nekongiri.
Diamond chivhariso PCD * 3 Yakazara Round 3pcs
Museve segmented diamond plug
* Arrow segmented diamond plug inoshandiswa kugaya kunyorera, senge pamusoro pekukuya uye kubvisa kubviswa. Iyo ARROW chikamu dhizaini ichapa inokurumidza kugadzirwa mitengo uye nekusiya yakashata chimiro.
Pashure: Trapezoid Kukuya Plate
Zvadaro: Professional nedhaimani uriri vachikuya ndiro